Mkpụrụ Ugbo Mkpụrụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mkpụrụ Ugbo Mkpụrụ
Sevok Onion: Atụmatụ bara uru na-eto eto
Eyịm bụ otu n'ime nri ndị a na-ejikarị eme ihe, na-enweghị ike iche ma ọ dịkarịa ala otu nri nri obodo. E kwuwerị, na-enwe ísì ísì na ísì ísì, ọ na-enweta akwụkwọ ụtọ dị mma mgbe a na-agwọ ya. Otú ọ dị, nri abụghị nanị ụzọ a na-esi eji ihe oriri a eme ihe, n'ihi na a na-ejikarị ya na nkà mmụta ọgwụ, dịka ọgwụ nje antiviral na dịka ihe aneseti maka ọkụ.
Agrotechnics nke ịbasị mkpụrụ osisi: iwu nke ịkụ na-elekọta
Na ihu igwe anyị, eyịm na-eto eto ruo afọ abụọ. N'afọ mbụ ha kụrụ mkpụrụ - chernushka. Onu sevok na-eto na ọdịda site na mkpụrụ ndị a, na na mmiri nke na-esote afọ ọ na-akụ na akwa. Site na ya nnukwu bulbs eto na mgbụsị akwụkwọ. Eyịm bụ ihe oriri ihe oriri na-ewu ewu na ọtụtụ mba nke ụwa. O toro ogologo oge ma jiri ya mee ihe na nkà mmụta ọgwụ na nri.
Oge mmepụta mmanụ n'ime ọkụkọ pullet
Decembrist akpọnwụ: otu esi nagide ya?
Royal Begonia - karịsịa na-eto eto eze nwaanyị begonias